UPDATE: Ururka Al-Shabaab War ka soo saartay qaraxii lagu dilay mas’uuliyiin caan ah oo ka tirsanaa Hirshabeelle | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Ururka Al-Shabaab War ka soo saartay qaraxii lagu dilay mas’uuliyiin caan...
Balcad (Halqaran.com) – War ka soo baxay maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab ayaa looga hadlay qarax xoogan oo maanta mas’uuliyiin ka tirsan maamulka HirShabelle lagula eegtay deegaanka Gololey oo dhaca inta u dhexeysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay in qaraxaasi oo ahaa miino ay la eegatay gaari nooca raaxada ah oo ay la soceen mas’uuliyiin ka tirsan maamulkaasi.
Afhayeenka howlgallada Al-Shabaab, Cabdicasiis (Abuu Muscab) oo la hadlay Andalus oo ku hadasha Afka Shabaabka ayaa sheegay in weerarka oo ahaa mid qorsheysan lagu dilay mas’uuliyiintii bartilmaameedka ahaa, uuna u dhacay sidii loo rabay, sida uu hadalka u dhigay.
”Allaah fadligii howlgalku wuxuu u dhacay sidii loo qorsheeyey, waxaana lagu dilay cadowgii bartilmaameedka ahaa”, ayuu yiri afhayeenka ciidanka Al-Shabaab Abuu Muscab. ma shaacin afhayeenku khasaaraha iyo magacyada mas’uuliyiinta lagu dilay qaraxaasi.
Qaraxii maanta ayaa waxaa ku dhintay guddoomiye ku xigeenkii Maaliyadda ee gobolka Shabeelaha Dhexe, Cabdulllaahi Shitaawe, wasiirkii hore ee wasaaradda Ganacsiga Hirshabelle, Sabriye Cusmaan iyo nin lagu magacaabayey Xasan Baldoos, kaas oo la shaqeynayey mid ka mid ah hay’adaha Samafalka ee gobolkaasi, sida ay daabacday mareegta Halqaran.com.
Ma jiro ilaa iyo hadda wax faah faahin kama soo bixin dhanka madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle oo ku aadan qaraxaasi.
Ururka Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro jidgal ah iyo qaraxyo ka fulisa waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeelaha Dhexe.
mas'uuliyiin ka tirsanaa Hirshabelle